Bannaanbaxyo ka dhacay safaaradda Ruushku ku leeyahay Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bannaanbaxyo ka dhacay safaaradda Ruushku ku leeyahay Stockholm
La daabacay fredag 2 augusti 2013 kl 10.24
Waxaa saaka safaaradda Ruushka horteeda isugu soo baxay dad ka kala socday ururada u dooda khaniisiinta. Dadkaas oo ay tiradoodu gaareyso 200 oo qof ayaa halka isugu yimid si ay cabasho uga muujiyaan sharci dhowaan Ruushka ka soo baxay oo ay dad badani u arkaan in uu faquuqayo dadka jinsigooda la galmooda. Waxaana halkaas boliisku ku qabtay laba qof oo galay deyrka safaaradda.
Dadkii halkaas isugu baxay lulayeen calanka midabada badan oo lagu yaqaan ururada dadka jinsgooda u galmooda. Shuruudihii ay ku doodayeenna waxaa ka mid ahaa in calankooda laga taagno safaaradda Iswiidhen u fadhida Moosko.
Waxaa dadkii la qabtay ka mid ahaa laba dumar oo socday ururka Femen kadib markii ay intay boliiska dhaafeen galeen deyrka safaaradda. Waxaa lagu eedeeyey in ay sharci-darro ku galeen dhulka safaaradda.
Bannaanbaxaani wuxuu la xiriiraa sharci dhoowaan ka soo baxay baarlamaanka Ruushka oo mamnuuc ka dhigaya in dacaayad loo sameeyo khaniisnimada.